Ikhowudi yokunxiba yomtshato wasebukhosini: Yintoni enokuthi kwaye ayinakuze uzalwe - Indumasi
Eyona Indumasi Yintoni iKhowudi yokunxiba yoMtshato kaMeghan Markle kunye neNkosana uHarry?
INkosana uHarry kunye noMeghan Markle-kunye neendwendwe zabo-kufuneka bathobele imithetho yemfashini yesiko kwimitshato yabo.Imifanekiso kaGetty
Ngaphandle komtshato oqhelekileyo, ukucacisa ikhowudi yokunxiba kunokudideka. Iindwendwe ezimenyiweyo zihlala zishiya ukuzibuza, kuthetha ukuthini ngokusesikweni? Kwaye kutheni ikwakhona inketho yolwandle olusesikweni?
Nangona kunjalo, xa umtshato ucwangciselwe ukuba uqhubeke kwinqanaba lehlabathi kwaye ubandakanye isihlwele esincinci sabantu abadumileyo kwaye uninzi lwasebukhosini, ikhowudi yokunxiba ingaphezulu nje kokubalulekileyo. Ngokukodwa xa iya kugutyungelwa zezona ndawo zikhulu zeendaba emhlabeni.
Nini INkosana uHarry kwaye UMeghan Markle Bopha iqhina, balindele ukuba iindwendwe zabo ezingamadoda zinike iyunifomu, idyasi yasekuseni okanye isuti yokuphumla kwaye abafazi banxibe ilokhwe yasemini enomnqwazi. Ngapha koko, bayiprintile loo miyalelo kwizimemo zabo ezihonjisiweyo.
Kodwa oko kuthetha ntoni ngoku kwiindwendwe zomtshato? Masiyiqhekeze.
Yintoni ilokhwe yosuku?
Ewe, ngokuqinisekileyo ayisosinxibo esihamba ngokuhlwa.
Njengengcali ye-etiquette uMyka Meier uxelelwe Idolophu kunye nelizwe Umtshato wasebukhosini ngokwenene ngumsitho wokugcina. Iindwendwe ezingamakhosikazi ziyakhuthazwa ukuba zigubungele amagxa azo kwaye zikhethe uyilo olungenazinto zokusika okanye iinkcukacha-kwaye kufuneka banxibe izihlangu ezivaliweyo. Ngokusisiseko, le asiyondawo yokuvavanya indlela entsha yeenqwelo-moya; iimpahla zesintu ziyinkosi.
Ubude kufuneka bube mnandi, nabo. Oko kuthetha ukuba ngaphezulu ngentla okanye ngaphantsi kwedolo, okanye ubude beti. Iipateni ze-Garish azamkelekanga-kwaye akukho mnyama (umbala wokulila i-corgi yakho) okanye umhlophe (ngokucacileyo ugcinelwe umtshakazi). Iipateni ezifihlakeleyo okanye imibala eqaqambileyo, edlamkileyo ilungile.
Kutheni le nto abasetyhini besoloko benxiba iminqwazi kwimitshato yasebukhosini?
Indawo yomnqwazi eyomeleleyo kumtshato kaKate Middleton neNkosana uWilliam.Imifanekiso kaGetty
Imitshato yasebukhosini yindawo eshushu ngokusemthethweni kwiminqwazi ephambeneyo. Ukusebenzisa ukusetyenziswa kweentyatyambo ezinkulu, iintsiba kunye neerbhoni yindlela eyamkelekileyo ekuhlaleni yokuphelisa uvuyo lwakho kwesi sibini sitsha. I-Fascinators, nayo, yamkelekile entloko kumtshato wasebukhosini.
Ngelixa abantu besetyhini benganyanzelekanga ukuba bazikhulule xa bengena ecaweni, becinga ukuba abo bahleli emva kwakho yeyona nto ilungileyo. Isitiya esivuthayo esigcwele esiphuma entlokweni yakho sinokuthintela izitya zamva kamva ekuboneni ngokupheleleyo ukutshintsha kwesibhambathiso sesibini sasebukhosini.
Nceda ucacise ukuba yintoni idyasi yakusasa.
UDavid Beckham ngengubo yakusasa emtshatweni wePrince William noKate Middleton.Imifanekiso kaGetty
Le yimpahla esemthethweni neyesiko, ihlala inxitywa ngamadoda kwimisebenzi yaseburhulumenteni eNgilane, kubandakanya imitshato, ubhaptizo nemingcwabo. Ngwevu okanye mnyama, ingubo yakusasa ineqhosha elinye kunye neepelile zencopho- kunye nemisila, kunjalo. Ihlala idityaniswa nebhulukhwe enemigca, idyasi, ishati kunye neqhina.
Le mpahla iza nesuti yezixhobo ezinokukhethwa, kubandakanya isikwere seepokotho, iiglavu, umnqwazi ophezulu, kwaye-nokuba uyayidinga okanye awuyidingi - induku.
Ngaba ilounge isuti yinto efanayo nesweetsuit?
Hayi, isuti yokuphumla ayifani ne sweatshi. (Ngubani owakukhulisayo?) Yisuti nje yomndilili, efana nezo zinxitywa ngoosomashishini. Kufuneka ibemnyama okanye ingwevu, njenge suti yakusasa, kwaye idityaniswe nebhanti edibeneyo.
Luhlobo luni lwengubo yomtshato eya kunxitywa nguMeghan Markle?
into evanithi ngokuthambile uxele eyokuqala Iisuti Umdlali we-actress akayi kuba neyodwa, kodwa iilokhwe ezimbini zomtshato. UMarkle uza kunxiba ingubo yomtshato yomtshato etshintshe izifungo zakhe neNkosana uHarry. Uya kutshintsha abe yingubo ephucukileyo kulwamkelo lwangokuhlwa olugcinwe yiNkosana uCharles e Indlu yeFrogmore . UKate Middleton naye wayenotshintsho lwempahla, ngexesha lomtshato wakhe kwiNkosana uWilliam.
Ngelixa kungacacanga ukuba ngubani kanye kanye oza kuyila nokuba yeyiphi na iilokhwe zika-Markle-ababhukisi abanemali kwi-Burberry, Ralph & Russo, Stewart Parvin no-Erdem. UVictoria Beckham uqinisekisile ukuba akasebenzi kuyo nayiphi na yeengubo zomtshato zikaMarkle.
Ngaba uMeghan Markle umtshakazi uza kunxiba i-tiara?
ILady Diana, iNkosazana yaseWales ngomhla womtshato wayo.Imifanekiso kaGetty
Akufuneki ukuba amalungu osapho lwasebukhosini banxibe entlokweni ebengezelayo ngexesha lomtshato wabo, kodwa siqinisekile ukuba uMarkle uzokutsiba ngeli thuba lokunxiba indlalifa yosapho ngemini yakhe enkulu.
Kukho intelekelelo eninzi ayakuhamba ngayo I-Spencer Tiara , eyayinxitywe yi-Princess Diana ongasekhoyo xa wayetshata utata weNkosana uHarry, iNkosana uCharles. Ezinye izinto zentloko ekusebenzeni kubandakanya iStrathmore Rose Tiara, iLotus Flower Tiara kunye neQueen Mother's Cartier Bandeau.
Iza kunxiba ntoni iNkosana uHarry?
Nguwo akunakwenzeka ukuba iNkosana uHarry izakunxiba iimpahla zomkhosi ukubopha iqhina- njengoko kwenza iNkosana uWilliam- kuba akaselilo ilungu lomkhosi oxhobileyo. Kodwa okwangoku unguKapteni Jikelele weRoyal Marines, ke angayihlonipha loo ndima ngexesha lomtshato wasebukhosini.
Ukuba uthatha isigqibo sokungahambi ngendlela efanayo, ke kukholelwa ukuba iNkosana uHarry iya kunxiba idyasi yasekuseni okanye isuti yokuphumla, njengazo zonke iindwendwe ezingamadoda.
Ngaba unayo eminye imibuzo malunga nomtshato wasebukhosini? Jonga eyethu FAQ apha . Kwaye nantsi into ethe kratya kwimpembelelo yefashoni ka-Markle.
Ugqirha we 'Veronica Mars' UBrad Bufanda Udlulile
Akukho magumbi okuhlambela, akukho siphikisi sokubumba seSephora: Ukuthengisa kutshintsha njani i-Post-Coronavirus
Yonke into esiyaziyo malunga neTrump's White House Paint yaKhe eneCoke kunye no-Abe Lincoln
Ngaba iNetflix yavuza nje uMhla wokuKhutshwa kweLucifer?
billy graham ubudala ekufeni
Yimalini ukwenza inkohlakalo enye
ngowuphi unyaka disney wathenga isimanga
Ngaba kunokwenzeka ukubuyisela umntu ebomini
indlela yokunyusa uxinzelelo lwegazi
Iifilimu eziphezulu ze-netflix zabantwana
izongezo ezisebenza njenge-adderall